Taarikada Ilmaha ee ugu Fiican Bamboo-Sare iyo Warshad | Bambo dheer
[Bamboo dabiici ah]:Looxa carruurta ee bamboodu waxa uu ka samaysan yahay 100% bamboo dabiici ah, qaabka saxankana waxa uu ku xardhan yahay laysarka. Kuma jiraan BPA, kuma jiraan balaastiig ama melamine, kumana jiraan wax kiimikooyin waxyeelo leh.
[Bamboo dabiici ah]: Looxa carruurta ee bamboodu waxa uu ka samaysan yahay 100% bamboo dabiici ah, qaabka saxankana waxa uu ku xardhan yahay laysarka. Kuma jiraan BPA, kuma jiraan balaastiig ama melamine, kumana jiraan wax kiimikooyin waxyeelo leh.
[Naqshadda madaxa bisadda]: Naqshadeynta qaabka madaxa bisadaha ayaa ah mid aad u xiiso badan, taas oo u oggolaanaysa carruurtu inay jecel yihiin inay wax cunaan oo ay bartaan inay keligood wax cunaan, sidaas darteed qalabkan miiska ayaa aad ugu habboon carruurta da'doodu tahay 1-5 kuwaas oo bilaabaya inay bartaan inay wax cunaan oo ay kaligood cunaan.
[Dareenka saxda ah ee is-cunida iyo kala-guurka]- Aad ugu habboon in la tababaro dadka si madaxbannaan wax u cuna ama u baahan inay wax cunaan. Iska yaree walaaca una abuur jawi deggan oo nadiif ah waalidiinta iyo carruurta yaryar. Kama tagi doono urta iyo midabka cuntada.
[Si sahlan loo nadiifiyo]: Dusha sare ee saxanku waa mid siman oo sahlan in la nadiifiyo, xitaa ketchup si toos ah ayaa loo tirtiri karaa. Waxaad isticmaali kartaa maro saxan ah si aad ugu dhaqdo weelka ilmaha biyo saabuun khafiif ah, maadaama aysan ku haboonayn foornooyinka, microwaves ama weel dhaqida. Waa in la ogaadaa in, fadlan ku dhaq looxa bambooga carruurta waqti ka dib isticmaalka. Ha qooyn saxanka bamboo muddo dheer. Ka dib markaad dhaqdo, dhig meel hawo fiican leh si ay u engegaan.
Cabbirka Kartoonka 245*200*21
Baakadaha Baakad dhaqameed
Lacag bixinta 30% TT dhigaal ahaan, 70% TT liddi ku ah nuqulka B/L
Miisaanka guud Qiyaastii 0.25kg
Waxay qaadi kartaa noocyo kala duwan oo cunto ah, sida dhammaan noocyada bariiska, baastada, macmacaanka, miraha, xawaashka, iwm, cabbirka saxankuna waa ku habboon yahay cuntada ilmaha, mana keenayso qashinka cuntada.
Kuma habboona dhallaanka guriga wax ku cuna oo keliya, laakiin sidoo kale waxay keeni karaan saxannada cashada bamboo ee dhallaanku si ay u isticmaalaan marka ay bannaanka wax ku cunayaan. Ilmuhu waa da' weyn oo loo isticmaali karo saxan cunto oo caadi ah. Waxa kale oo lagu siin karaa hadiyad ahaan asxaabtaada iyo qoyskaaga, taas oo ah doorasho wanaagsan.
Hore: Saxarada bamboo-geeska ahi waxay ku habboon tahay carruurta iyo dadka waaweyn inay wax cunaan oo dib ayaa loo isticmaali karaa
Xiga: Saxanka cashada ee bakaylaha u eg bamboo waxa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo cuntada
Saxanka cuntada ee bamboo-dabiiciga ah wuxuu noqon karaa...
Bamboo Badbaado leh oo si weyn loo isticmaalo
saxaarad bamboo square ah ayaa ku haboon carruurta...
Bamboo dabiici ah oo badbaado leh oo u adeegaya saxan casho leh 3 ...
100% orso bamboo qaabaysan oo socod baradka ah
Saxaarad leydi leh midabka bamboo waa la habeyn karaa